Reflections: Jan 24, 2014
स्मृतिपटमा विलिन .....
मलाई कुममा बोकेर हजुरबा हिड्दै हुनुहुन्थ्यो। म चाही डरले उनलाई भुत्ल्याउदै , लात्ताले हिर्काउदै थिए।
हाय जिन्दगि ! स्म्रितिपटमा बिस्तारै विलिन हुदै छ; जसै उनी समयको नोक- झोकमा विलिन भए। बस् जिन्दगी यत्तिनै रहेछ, आउनु र विलिन हुनु। गाह्रो त याद लिएर बाच्नेहरुलाइ हुने रहेछ।
म घर पुग्नेबित्तिकै आगनमा आमा आउनु भो। आँखा रसीलो पार्दै म्वाई खाएर सुम्सुम्याउनु भो। त्यो अलौकिक क्षणपछी म हजुरबुवाको कोठामा गए। ठुलो हजुरबा , हजुरआमा , काकीहरु सबै थिए। ओर पर छर छिमेकीहरु आउने जाने क्रम चलिरहेथ्यो। दुई महिनासम्म थला परेको,कुप्रिएको शरीर, पानी भरिएर सुन्निएको आँखा, अथाह पीडामा पलेटी कसी बसेका मेरा हजुरबा।
"माथि हेर्नुस् त बुवा ,उ जेठो नाति आयो। सुदीप आयो। " मेरो बुवाले भन्नुभो।
"सुदीप आयो भन्दै ,बल गरेरै शिर उठाएर मतिर हेर्नुभो।" आँखाबाट आँसुका दानाहरु झार्दै मलाई समात्नु भो। "मलाई छोडेर नजा है अब ",हजुरबाले भन्नुभो।
माथिल्लो टोलमा यो गाउँको वीर ढल्यो अब भने 'रे। उनी रहिञ्जेल्सम्म आगनभरी आगन्तुकहरु, सुभेच्छुकहरुको कमी भएन। चौतारामा संगै उक्लिने उनका दाई अब एक्लै जानेछन। घर घरमा पुगी सोध्ने, खोज्ने एउटा सहृदयी पात्र उनलाई जान्नेहरुले गुमाए। तर मैले सत्य गुमाए। एउटा सिधा साधा इमानदार कर्मयोगी गुमाए। मेरो भाइले त एउटा मुटुको टुक्रा गुमायो। मेरो परिवारले आड लाउने भित्तो गुमाए।
"पार्वती, मेरा यस्ता राम्रा छोरा -बुहारी, नातिहरु छन्। यत्तिका संपत्ति छ ,मैले कसरी छोडेर जाने होला। " मेरो आमालाई बोलाएर बिस्तारै मलिनो स्वरमा भन्नुभो। मनुष्य चोला यिनै इच्छा आकाँन्क्ष्याहरुको घम्सा-घम्सी रहेछ फगत्।
आज तेर्हौ पुण्य तिथीको दिन उनी सम्झनाका पत्रहरु चिर्दै छन् मेरो मस्तिस्कमा। धेरै सपनाहरु ओइलाए ,मुर्झाए। उनी अब एउटा अद्रिस्य सपना भए।
बिहान एक्लै हिड्दा सेतो तन्ना देख्छु , तुसारोको। जती अघी बढेपनि बस् सेतै देख्छु। जिन्दगी'नि त्यस्तै भएछ। हा ! सबै अदृस्य स्मृतिमा विलिन भैरहेछ।
Posted by Sudeep Bartaula at 6:53 AM
Labels: family, loss, Nepali, personal